Dowladda oo ku dhawaaqday in uu dalka ka jiro nooca cusub ee Karoonaha | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladda oo ku dhawaaqday in uu dalka ka jiro nooca cusub ee...
Dowladda oo ku dhawaaqday in uu dalka ka jiro nooca cusub ee Karoonaha
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa shacabka ugu baaqday inay u hoggaansamaan tallaabooyinka caafimaad ee looga hortaggayo fiditaanka cudurka Karoona xilli cudurka uu kusoo laba kacleeyay halkaas.
Wasiirka ayaa tilmaamtay in uu aad u sarreeyo heerka isku gudbinta cudurka sidaas darteedna ay badatay tirada dadka u dhimanayo cudurka.
Markii ugu horreysay ayay tilmaamtay Wasiir Fowsiyo in nooca cudurka uu yahay mid cusub gaar ahaan nooc cusub oo cudurka Covid-19 ah uu dalka fara ba’an ku hayo.
“Isu gudbinta cudurka aad buu u korreeyaa, weli sheybaar laguma xaqiijinin nooca cudurka ee isbaddalay ama in uu yahay kii hore ama in kale laakiin dhakhaatiirta iyo dadka culuunta ku takhasusay shaki weyn ugama jiro in uu yahay mid cusub oo ka duwan isku gudbiskiisa iyo dhimashada oo aad u badatay”ayuu tiri Wasiir Fowsiyo.
Boqolaal ka mid ah shacabka kunool Caasimadda ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu soo ridatay cudurka Karoonaha oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada kunool Caasimadda, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday xayiraado.
Previous articleQaramada Midoobey oo baaq u dirtay Madaxda Soomaaliyeed
Next articleMarwada koowaad ee dalka oo ugu hambalyeysay haweenka Soomaaliyeed maalinta caalamiga ah ee 8-da Maarso.